Soomaalida ku dhaqan Talyaaniga oo mudaharaadyo cabasho ah dhigay (Sawiro) – SBC
Soomaalida ku dhaqan Talyaaniga oo mudaharaadyo cabasho ah dhigay (Sawiro)
Posted by editor on May 22, 2011 Comments
Mudaharaadyo cabasho ah oo ujeedadu aheyd in dawlada Talyaaniga loo soo bandhigo dhibaatada & cabashooyinka ay qabaan dadka Soomaalida ee ku dhaqan wadankaasi iyo waliba kuwa kale ee u dhashay dalalka Itoobiya, Morocco, Tuniisiya & Eretereeya ayaa ka dhacay magaalada Firenze ee wadanka Talyaaniga, iyadoo banaanbaxaaasi sidoo kale ay ka soo qayb galeen dad dhalashadoodu tahay Talyaani oo u olaleeya arimaha caawinta qaxootiga ama ajaaniinta wadankaasi ku sugan.
Dadka Talyaaniga u dhashay ee banaanbaxan ka qayb galey waxay ka tirsan yihiin ururo u olaleeya arimaha xuquuqda xaqootiga & ajaaniibta, waxaana hogaaminayey nin lagu magacaabo Mr.Lorenzo , iyagoo muujiyey sida ay u garab istaagan yihiin dadka ajaaniibta ah ee dhibaatooyinka dhanka xuquuqda kaga maqan yihiin dawlada Talyaaniga.
Mudaharaadayaasha ayaa socod kusoo maray fagaarayaal muhiim ah oo ku yaala Magaalada Firenze sida xarunaha dowlada iyo meelo kale mana jirin wax buuq iyo rabash ah oo mudaharaadayaasha la kulmeen ama iyaga ay geeysteen, waxana qayb weyn dhinaca amaanka ka qaadanayay ciidamada loogu talo galay mudaharaadyada ama ka hortaga rabshadaha.
Saxaafada wadanka Talyaaniga ayaa si weyn banaanbaxan uga hadlayey iyadoo Telefishanadu ay baahinayeen isu soo baxan, kuwaasi oo wareysi kala duwan ka qaaday dadkii soo abaabulay isu soo baxan.
Dadkii ka hadley mudaharaadkan cabashada ah ee looga dalbanayey dawlada Talyaaniga inay siiso xuquuq ajaaniibta waxaa ka mid ahaa Cawaale Jaamac Salaad oo ah Gudoomiyaha Jaaliyadda Puntland ee dalka Talyaaniga, isagoo sheegay sheegay in markasta iyo saacad kasta ay diyaar u yihiin inay soo bandhigaan cabashadooda iyo xuquuqaha kaga maqan dowlada Talyaaniga, wuxuuna ugu baaqay dhamaan Soomalida inay muujiyaan isku xirnaan iyo inay yeeshaan hal cod oo mideysan.
Mr.Lorenzo oo madax u ah koox telyaani ah oo si tabarucaad ah u garab taagan markasta dadka Soomaliyeed iyo kuwa kale ee ajnabiga ah oo isna ka hadlay goobta mudaharaadka ayaa ka dhawaajiyay in iyaga hadii ay yihiin shacabka telyaaniga ay diyaar u yihiin inay la baadi goobaan xuquuqdooda dadka ajnabiga ah ee wadankan ku dhaqan gaar ahaan shacabka soomaliyeed ee wadankoodii colaaduhu la derseen.
Mudaharaadka ayaa ka soo qaybgalayaashii kusoo bandhigeen Music iyo heesaha wadan kasta uu caan ku yahay , iyadoo dadkii Soomaliyeed ee mudaharaadka joogay halkaasi ay ka qadeen heesta ah HAYBAD WAXA KU LEEDAHAY DALKAAGA HOOYO iyo Heesta astaanka calanka soomaliyeed.
Mudaharaadkaasi ayaa ku soo dhamaadey si nabad ah, iyagoo ka dalbadey dawlada Talyaaniga inay wax ka badasho xaaladaha ay kula dhaqanto dadka ajaaniibta ah ee ay Soomaalidu ka mid tahay ee ku dhaqan wadankaasi.